Sarintanin'i Bali sy sarintany amoron-dranomasina " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Sarintany naharitra » Sarin-tany amoron-dranomasina Bali sy sarintany
Sarintany ankapobeny mahaliana sy torapasika any Bali
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia afaka mahita ny toetr'andro any Bali ankehitriny.
Ao Bali dia tsara kokoa raha mandeha amin'ny fialan-tsasatra manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Oktobra, raha te hiditra amin'ny vanimpotoana ianao, mba tsy hanahoranao ny toetrandro. Ao anatin'izany rehetra izany, ny vanin-tsolika eto dia manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra. Ny hafanana antontan'isa antonony mandritra ny taona dia ao anatin'ny + 30… + 32. Somary tsy dia saro-kenatra izany ho an'ireo izay sendra azy voalohany ity. Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny mari-pana dia ambanin'ny +25, na dia amin'ny hariva. Araka izany, mora ny mahita ny antony T-shirt, T-shirt, shorts ary flip flop no akanjo lehibe ao Bali. Amin'ny fotoana rehetra amin'ny antoandro, afaka mitaingina bisikileta ianao, mahatsapa fiononana amin'ny tenanao. Indraindray dia mety mila mpamaky rivo-doza na mpanondrana maivana (ho fitsangatsanganana any avaratr'i Bali amin'ny alàlan'ireo lalana eny an-tendrombohitra).
Sarintany mahafinaritra an'i Bali. Maherin'ny zato. Ity dia saika feno ny sarintany manintona ireo toerana mahasarika sy ny tora-pasika ao amin'ny nosy.
Azonao atao ihany koa ny mitady amin'ny sokajy (morontsiraka, distrika, tempoly, ...) na amin'ny anarana mivantana amin'ny teny rosiana na anglisy.
Azonao atao ihany koa ny mametra ny valin'ny fikarohana mankany amin'ny halaviran'ny toerana misy anao. Ohatra, ny riandrano ao anatin'ny 20 km miala anao. Na ny fahitana rehetra ao anatin'ny 10km.
Tena mety izy io. (raha mandeha irery any Bali)
Ny filazalazana ireo marika eo amin'ny sarintany amin'ny fizarana famenoana. Fa ny fampahalalana fohy sy sary fohy, ary ny toerana dia efa hita sahady.
Misy koa ny fitetezana avy amin'ny sarintany google. Eo amin'ny farany amin'ny famaritana ny marika rehetra dia misy rohy mankany amin'ny kajikajy lalana.
Eto, eo amin'ny vavahadin-tserasera, misy sarintany mitovy amin'ny firenena hafa.
Ny teboka malemy amin'ity sari-tany ity dia ny tsy fahafahany misintona azy ivelan'ny Internet. Saingy eo am-panatanterahana izany ny asa. Ary rehefa afaka kelikely, homena fotoana toy izany.
Fiomanana fanampiny dia efa voaomana ho an'ireo mpampiasa voasoratra. Toy ny:
mamorona ny sari-taninao
ampio ny marikao
misintona ny diabe (havoana an-tendrombohitra, mandalo ny ala, lalana tsy voarindra, sns).
manaova takelaka ao amin'ny kaontinao manokana, toerana mahaliana anao,
fifaneraserana amin'ireo mpandray anjara hafa.
Eo an-dalam-pamoronana mpikarakara ny dia ihany koa izahay. Miaraka amin'ny lisitra, ny drafitra ary ny fifehezana ny teti-bola sy ny maro hafa ilainao rehefa mandeha.
Raha manana sosokevitra na hevitra momba ny asan'ny sarintany na tranokala ianao, dia asio famantarana.
Fanovana farany 4 volana lasa izay nataon'i Ghost
Mahita teboka mahaliana (karazana iray na hafa) ao anatin'ny elanelana lavitra amin'ny misy anao dia tsara!
Tsy ampy izany raha tany Bali izahay tamin'ny farany.
Misy ny tolo-kevitra hampiasana ny lisitr'ireo toerana mahaliana, mba tsy hisorohana ny fitsidihana azy ireo. Miaraka amin'ny fahaizana manamarika ny efa notsidihina taorian'ny zava-misy. Satria efa nisy ny teo alohan'ny hitsidihanay zavatra mitovy amin'ny faharoa).
Saingy mahafinaritra ihany koa izany, satria any Bali ny iray dia faly amin'ny dia mitaingina fotsiny, mankafy ny finiavana sy ny natiora manodidina.
Natty, misaotra anao amin'ny valin-teninao sy ny hevitrao!
Ny fiasan'ny checklists dia kasaina tahaka izany. Ka misy ny fanamarinana efa napetraka mialoha miaraka amin'ny fahaizana manitsy (ohatra, "izay tsy tokony hohadinoina ny mitondra anao amin'ny dia"), ary hisy ny fizahana tsy ara-dalàna, noforonina sy nofenoin'ireo mpampiasa (ohatra, ny lisitry ny fijery mahaliana, ny lisitry ny fividianana ao anatin'ny fiantsenana na fitsangatsanganana amin'ny tsena eo an-toerana, zavatra toy izany).
Ankoatr'izay, misy ny faniriana hanambatra ireo lisitra ireo amin'ny fikojakojana ny teti-pandrosoana efa nomanina sy tena izy.
Miandry 🙂 izahay